DriverPack Solution - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
20-12-2010, 12:27 AM
DriverPack Solution 10 Professional
ဒီမိသားစုလေးမှာ Driver နဲ့ပတ်သက်လို့ပြသနာလေးတွေ တက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အကိုKznt ဆွေးနွေးထားတဲ့ Windows7Drivers ရယူနိုင်သော နေရာများ ဆိုဆွေးနွေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ... ။ အကိုမျိုးဇော်လည်းဒီနားလေးမှာ Windows7Driversများဆိုဆွေးနွေးထားတဲ့ နေရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ် ကိုကျောက်ဖြူလည်း Windows XP Driversဆို Driver အမျိုးအစားလိုက် ဆွေးနွေးထားတာလည်းရှီပါတယ်ခင်ဗျာ အခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်ဒီဆော့ဝဲကို လည်းလူတော်တော်များများတော့သိကြမယ်ထင်ပါတယ် နောက်ပြီးကျွန်တော်အခုဒီအခွေလေးကိုတင်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ Driver ကပြသနာတက်ကြပါတယ် တကယ်တော့အဲဒါတွေကစက်ဝယ်ကတည်းကပါပြီးသာပါ အမှတ်တမဲ့ပျောက်တာတို့ နောက်ပြီးတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်လက်တွေပြောင်းနဲ့ ပျောက်ကုန်တာတို့ အဲဒါနဲ့ပြသနာတွေ တပြုံကြီးတက်လာရော....... ပြသနာတက်ပေ့မယ်အဖြေတွေလည်းရှီပါတယ် အခုကျွန်တော်ဒီအခွေလေးတင်ပေးထားရတာကတော့ ကျွန်တော်လက်တွေ့လည်းသုံးဖူလို့ သုံးရလည်းလွယ်ကူလို့ဆိုတင်ပေးလိုက်တာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်စက်မှာ Driver ဘာအခွေမှမရှီဘူးတဲ့အဲဒါဆို Window7တင်ဆိုတော့ တင်လို့မရဘူးတဲ့စက်က XP ပဲတင်လို့ရမယ်တဲ့ အဲဒါနဲ့ကျွန်တော် XP တင်ပြီးတော့ ဒီကောင်လေးသုံးပြီးလုပ်ပေးလိုက်တာအဆင်ပြေသွာတယ်ဗျ ဝင်းဒိုးတင်းဒီအခွေလေးထည့် ပြီးတော့ Run လိုက်တာနဲ့စက်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ Drivers တွေကိုသူဘာသာရှာတယ် Driver အကုန်ပါပဲသူရှာပေးတာကတော့ ပြီးတော့ မိမိ Run ချင်တဲ့အကောင်လေးတွေကို အမှန်ခြစ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ Install ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားရောဗျ Webcam Driver တွေတောင်ရတယ်ဗျ စက်မှာသာ Webcam ကိုတပ်ထားလိုက်ပါ ပြီးရင်ဒီအခွေလေးထည့်လိုက်ပေါ့ အဓိကကစက်မှာသာတတ်ထားဖို့ပါပဲ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လည်းမလိုပါဘူး အခွေကသူ့ဘာသာ အလုပ်လုပ်သွားတာပါ လိုအပ်တဲ့အကိုအမများ ဒေါင်းယူကြပါ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့များတယ်ဗျ 4.11GB ပါခင်ဗျာ.........။[*]ဒီဖိုင်တွေအကုန်ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းတင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ Minn Khant ကူတင်ပေးထားတာပါ......
ဖိုင်အရွယ်အစား : 4.11 GB
တစ်ဖိုင်ချင်းစီကတော့ : 100MB
စုစုပေါင်းဖိုင်အရေအတွက် : 43 ဖိုင်
ကျွန်တော်နောက်အားရင်တော့ mediafire ကနေပြန်တင်ပေးပါမယ်... အားလုံးပဲ Driver အခက်အခဲကင်းရှင်းကြပါစေခင်ဗျာ...
ဒါနဲ့ကျွန်တော် Torrent မှာရှာတော့ ဒီအောက်က ၂ လင့်မှာဝင်ကြည့်ပေါ့ လင့် ၂ ခုမှာ Version မြင့်တာဖိုင်ဆိုဒ်သေးလာတယ် Version နိမ့်တာဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးနေတယ်ဗျ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာ Version အနိမ့်ပါ ဒါပေ့မယ် ကျွန်တော်သုံးတာကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ.........
ဒေါင်းလုတ်ချရတာအဆင်မပြေရင်လည်းဒီအောက်မှာအော်ခဲ့ပါခင်ဗျာ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဒီလင့်လေးမှာလည်းအော်လို့ရပါတယ် အားမနာပါနဲ့ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တုန်းကလည်းအားမနာပဲတောင်းခဲ့ဖူးလို့ပါ လိုအပ်ရင်တောင်းကြပါခင်ဗျာ..........
Update !!! (20-01-2011)== >>
အပိုင်း (၁ ) http://www.mediafire.com/?wtkmt9a4t43603f
အပိုင်း (၂ ) http://www.mediafire.com/?a872sbqd2buxuv8
အပိုင်း ( ၃) http://www.mediafire.com/?yawb6p779adldb2
အပိုင်း (၄ ) http://www.mediafire.com/?fohq8egurcv9jq8
အပိုင်း ( ၅)  http://www.mediafire.com/?m2n2us2so7azfcn#1
အပိုင်း (၆ )  http://www.mediafire.com/?8w6ziwj8pqe5gj7
အပိုင်း (၇ )  http://www.mediafire.com/?bm5n6yqixbmy6au
အပိုင်း ( ၈)  http://www.mediafire.com/?83p4dn32l513o6a
အပိုင်း ( ၉)  http://www.mediafire.com/?w83r88gh4ozbr7h
အပိုင်း (၁၀)  http://www.mediafire.com/?9bbnt8wa6e7qhme
အပိုင်း (၁၁ )  http://www.mediafire.com/?18nd3twbt3q13w0
အပိုင်း (၁၂ )  http://www.mediafire.com/?8ecytd27ggqdn64
အပိုင်း (၁၃ )  http://www.mediafire.com/?s4utrzinrquw5b8
အပိုင်း ( ၁၄)  http://www.mediafire.com/?8pje42bw38mnkn4
အပိုင်း (၁၅ )  http://www.mediafire.com/?x17exgyaxy80dio
အပိုင်း (၁၆ )  http://www.mediafire.com/?iyv01y4d4c99lrm
အပိုင်း (၁၇ )  http://www.mediafire.com/?mh2ngmkm385h7mw
အပိုင်း (၁၈ ) http://www.mediafire.com/?l4ftd5hqw9sofu5
အပိုင်း (၁၉ ) http://www.mediafire.com/?e7m1tiotwcf33fd
အပိုင်း (၂၀ ) http://www.mediafire.com/?6ol6pjx6i08fp61
အပိုင်း (၂၁ )  http://www.mediafire.com/?8sl64bhxox5h48y
အပိုင်း (၂၂ )  http://www.mediafire.com/?as2cff5g5m3sffj
အပိုင်း (၂၃)  http://www.mediafire.com/?wpgd9s4b3u4g6sj
အပိုင်း (၂၄ ) http://www.mediafire.com/?l5s8wgobm5mnaga#1
အပိုင်း (၂၅ ) http://www.mediafire.com/?jtn86sxr5s22s91
အပိုင်း (၂၆ ) http://www.mediafire.com/?k8ocvo6okt13a3a
အပိုင်း (၂၇ ) http://www.mediafire.com/?2qr6nj5t6dfjh4h
အပိုင်း (၂၈ )  http://www.mediafire.com/?a9c8do8029qm74w
အပိုင်း (၂၉ )  http://www.mediafire.com/?6hk8lam6yhzpqb5
အပိုင်း ( ၃၀)  http://www.mediafire.com/?4vv4grc3fb3swtt
အပိုင်း (၃၁ )  http://www.mediafire.com/?cx8498cmkaxip2v
အပိုင်း (၃၂ )  http://www.mediafire.com/?hicfm1y6fe09iyc
အပိုင်း (၃၃ )  http://www.mediafire.com/?17nmulvrs3r4uwq
အပိုင်း (၃၄ )  http://www.mediafire.com/?s1wapuw6lk8238l
အပိုင်း (၃၅ )  http://www.mediafire.com/?5uqoko8ow7w1h7s
အပိုင်း (၃၆ )  http://www.mediafire.com/?5d9d32jdk9wz66t
အပိုင်း (၃၇ )  http://www.mediafire.com/?nn55pzz4qkk1m23
အပိုင်း (၃၈ )  http://www.mediafire.com/?0zhg0t17r991icq
အပိုင်း (၃၉ )  http://www.mediafire.com/?0zhg0t17r991icq
အပိုင်း (၄၀ )  http://www.mediafire.com/?c8oxu51jc9xrx0d
အပိုင်း (၄၁ )  http://www.mediafire.com/?ty25gqlc9gnjgud
အပိုင်း (၄၂ )  http://www.mediafire.com/?8lsuh72jiciswht
အပိုင်း (၄၃ )  http://www.mediafire.com/?73vwb509z0blgco
Last edited by phoetharlay; 10-06-2011 at 07:08 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ phoetharlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ကျော်တိုး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, နိုးတူး, amaung344, bonge, g00gle, hellboy, ko myo, KznT, minthike, minthumon, tu tu, yawnathan
DriverPack Solution V.11 (x32-x64) - အဲဒီကောင်လေးအတွက် ဗားရှင်း ၁၁ ထွက်နေတယ်ဗျ မနေ့ကဝင်းဒိုးတင်းပြီး မားသားဘုတ်ခွေတွေ VGA , sound Card တို့အတွက် အခွေတွေ ထုတ်ထည့်နဲ့ရှုတ်တယ်ဆို DriverPack Solution ဆိုတဲ့အခွေထည့်တော့ ဒိတ်အောက်နေပီတဲ့ အက်ဒိတ်ဖြစ်တာလေးတင်ပါဆိုလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဗားရှင်း ၁၁ ထွက်နေတာကို အဲဒါနဲ့သတိထားမိလို့ ....... ကျွန်တော်ကတော့လက်ကသွက်တယ် ဒေါင်းလုတ်ချဖို့ကိုပြောတာပါ.......... ဟဲဟဲဟဲ
လိုချင်တဲ့လူများအောက်မှာဒေါင်းပါ..... အခုတော့ Torrent ဆိုဒ်ကိုပဲပေးလိုက်မယ်
Home page : http://drp.su/
ကြိုက်တဲ့လင့်တစ်ခုမှာသွားဒေါင်းပါ တကယ်လို့ အဆင်မပြေရင် ပြောလိုက်ပါ အဆင်ပြေအောင်တင်ပေးမယ်လေ..... အဆင်ပြေပါစေ.......
Update !!! Direct Download :
Last edited by phoetharlay; 11-05-2011 at 05:04 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ phoetharlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဝင်းကျော်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, bonge, g00gle, ko myo, KznT, minthike, minthumon, zo
ပြန်စာ - DriverPack Solution 10 Professional
DriverPack Solution အကြောင်းကို ဖိုရမ်မှာ ကိုဖိုးသားလေး ရေးထားပြီးသား ရှိမှန်း ကျွန်တော် မသိဘူး - ကျွန်တော် အဲ့တာကို တင်ပေးမယ် ဆိုပြီး လုပ်နေတာ တော်တော်ကြာပြီ - ပမာဏကလည်း များနေလို့ -င်လှည့် ခေါင်းလှည့် လုပ်နေတာ - ဒီနေ့မှာ သတိထားမိတယ် ရေးပြီးသားရှိမှန်း
အမှန်ပြောရရင် ကျွန်တော်က DriverPack တွေဆို အရင်က လုံးလုံးမှကို အထင်မကြီးတာ - သုံးဖူးတဲ့ ဟာတွေက တစ်ခုမှကို အဖြစ်မရှိဘူး - အဲ့တာနဲ့ DriverPack တို့ Driver Solution တို့ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Site တွေမှာ တင်ထားတာတွေ့ရင် လှည့်ကို မကြည့်ခဲ့ဘူး - အဲ့လိုနဲ့ ဟိုတစ်လောလေးကမှ Torrent ဆိုဒ်တစ်ခုမှ DriverPack Solution ဆိုပြီး တစ်ယောက် တင်ပေးထားတာ တွေ့မိတယ် - တကယ်တော့ DriverPack Solution ကို ကျွန်တော်က စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး - Seeds ဘယ်ကောင်များလဲ ဆိုတာ လိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ သူ့ကိုတွေ့တာ - အဲ့မှာ DriverPack Solution က Seeds တွေကို နည်းတာ မဟုတ်ဘူး - အဲ့တာနဲ့ ဒီ DriverPack Solution က ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်တောင် Seeds များနေရလဲ ဆိုပြီး စမ်းဒေါင်းလုပ်ချ သုံးကြည့်ရာကနေ တော်တော်ကြိုက်သွားတယ် - သုံးရလည်း အရမ်းလွယ်သလို - တော်တော်လည်း Update ဖြစ်တယ် - အကြိုက်ဆုံးကတော့ open source software ဖြစ်နေတာရယ် - ဒီလောက် စုဆောင်းပေးထားတဲ့ အားထုတ်မှုကို သူတို့က ပိုက်ဆံတစ်ပြားတစ်ချပ် မယူပဲ Free ပေးတာ - အဲ့တာကို လေးစားလို့ မဆုံးဘူး - လောလောဆယ် ကျွန်တော့်ဆီမှာ DriverPack Solution 11 ရှိတယ် - Torret နဲ့ ဒေါင်းလုပ်ချ ရွှတ်ခနဲပဲ - ဘာမြန်သလဲ မမေးနဲ့ - Seeds ကလည်း နဲတာမဟုတ်ဘူး - ကျွန်တော်ကတော့ Drivers အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူတွေ DriverPack Solution 11 ကို သုံးဖြစ်အောင် သုံးကြည့်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော်တော့ ဆောင်ထားတယ် - ထပ်ညွှန်းရရင်တော့ DriverPack Solution က ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး DriverPack ပါပဲ။
ကြော်ငြာဝင်တယ်လို့ ပြောရမလား အင်း ကြော်ငြာဝင်တာ ပါပဲ။ ပိုက်ဆံတော့ မရပါဘူး - ဒါပေမယ့် တကယ်ကောင်းတာလေး သိစေချင်လို့ ဝင်ပြီး အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတာပါ။
Last edited by KznT; 11-05-2011 at 02:49 AM..
ဝင်းကျော်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, amaung344, arkaraung, AZM, bonge, g00gle, ko myo, minthike, minthumon, phoetharlay, tu tu, zo
ကျွ​န်ေ​တာ်ေ​ဒါ​င်း​တာ (၁​၀)စ​က္က​န့်ေ​လာက်ပဲြ​ကာ​တယ်ဗျ.....ဟု​တ်ေ​တာင်ဟုတ်ရဲ့​​လား.....ဒီေ​လာက်များ​တဲ့​ ဒ​ရိုင်ဘာေ​တွ​စု​ထား​တဲ့​​ဖိုင်က ဒီေ​လာ​က်ေ​ဒါ​င်း​ရုံ​နဲ့​​ရ​ပါ့​မ​လား....ဖိုင်များ​မှားေ​ဒါ​င်း​မိ​တာ​လား....ြေ​ဖေ​ပးြ​က​ပါ​ဦးဗျာ.....ေ​လး​စား​စွာြ​ဖ​င့်.....
စက္ကန့်ပဲ ကြာတယ် လား
ကျွန်တော်အထင်တော့ အကိုလွှဲနေတာ ဒီလို။ ကိုဖိုးသားလေး တင်ပေးတဲ့ ဒီလင့် ကိုနှိပ်ပြီး အဲဒီဖိုင်ကိုပဲ ဒေါင်းလိုက်ရင်တော့ စက္ကန့်ပဲ ကြာမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒါပြီးသွားပြီလို့ မယူစပါနဲ့။ ဇာတ်လမ်းက ခုမှ စမှာ အကိုဆီမှာ torrent တင်ထားလား။ မရှိရင် ဒီမှာ ယူပါ။ ပြီးရင် install လုပ်လိုက်ပါ။ torrent ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ခုနက ကိုဖိုးသားလေး တင်ပေးတဲ့ ဖိုင်ကို2ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးဖွင့်ပါ။ သူ့ရဲ့ ဆိုဒ်က 2.85 GB ရှိတဲ့ အတွက် အဲဒီဖိုင် save ဖို့ လုံလောက်မယ့် နေရာကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ ဒါဆို torrent downloader က အကိုအတွက် စပြီး ဒေါင်းပေးနေပါလိမ့်မယ်။
လမ်းညွန်ပေးတဲ့ ကိုဖိုးသားလေးနဲ့ အခမဲ့ ကြော်ငြာပေးတဲ့ ကိုကေဇက် ပါ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဝင်းကျော်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, ကျော်တိုး, နေမင်းမောင်, ငြိမ်းချမ်း, amaung344, arkaraung, g00gle, ko myo, KznT, minthike, minthumon, phoetharlay, tu tu, zo
DriverPack Solution 11 build 2011.3.23 R230 Final (x32-x64)
DriverPack Solution 11 build 2011.3.23 R230 Final (x32-x64) | 2.85 GB
ဒီနေရာလေးမှာ အစ်ကိုတစ်ယောက်တောင်းထားတာကို လိုက်ရှာပေးယင်း တွေ့တာလေးကို Ifile ကို ပြန်ပြောင်းပေးထားတာပါ။ ကိုဖိုးသားလေးမှလည်း ဒီနေရာမှာ တင်ထားပေးပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အဲဒီမှာပဲ ဖတ်လိုက်ကြပါခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, bonge, KznT, phoetharlay
ပို့စ်7ခုအတွက် 12 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - DriverPack Solution 11 build 2011.3.23 R230 Final (x32-x64)
ခု ဟာ လဲ ဒေါင်းလိုက်အုံးမယ်နော်။
Ifile ကနေဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Find More Posts by zawmyintoo
ပို့စ် 18 ခုအတွက် 118 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Find More Posts by ပစ်တိုင်းထောင်
27-08-2013, 02:47 AM
ပို့စ် 34 ခုအတွက် 77 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Last edited by spadeone; 27-08-2013 at 02:48 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ spadeone အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောင်ဗလ, mmkyioo, sAnDViper, tu tu
Find More Posts by spadeone
XML Problem Design Solution kothu E-books များ226-12-2009 06:59 PM
Calculus - James Stewart 5th Edition with Solution Manual lwinsu E-Books & Tutorials019-09-2008 05:50 AM
ASP.NET Website Programming: Problem - Design - Solution, C# Edition tu tu E-books များ010-02-2008 04:19 PM